ကျွနူ်ပ်အတွက် စစ်မှန်သောဘာသာတရားသည် အဘယ်နည်း?
စားသောက်ဆိုင်များတွင် ရရှိနိုင်သောအစားအစာများကို စာရင်းပြု၍ရွေးချယ်စေခြင်းအား ဖြင့်ကျွန်ူပ်တို့ကို စွဲဆောင်စေပါသည်။ တချို့သောလက်ဘ္ဘက်ရည်ဆိုင်များတွင် အန့ံအရသာနှင့် ပြည့် စုံသောဟင်းမျိုးတစ်ရာကျော်နှင့် အမျိုးမျိုးသောကော်ဖီများအားဖြင့် ကြော်ငြာကပ်ကြသည်။ အိမ်များ၊ကားများဝယ်ယူုသည်အချိန်၌ပင်ကျွန်ူပ်တို့သည်အများကြီးထဲမှ တစ််ခုကိုရွေးချယ်ထားပါသည်။ ကျွန်ူပ်တို့သည်သေးငယ်သောရွာ၊ ကန့်သတ်သောနယ်မြေနှင့် တရားမဝင်အုပ်ချုပ်သောနိူင်ငံတွင် နေထိုင်သူ များမဟုတ်ပေ။ ဘုရားကြီးတစ်ပါးကဲ့သို့ ရွေးချယ်နိူင်သည်။ ကျွန်ူ်ပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုချင် သောအရာ၊ လိုအပ်သောအရာတို့ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိူင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေအတွက် စစ်မှန်သောဘာသာတရားသည် အဘယ်နည်း? လွတ်လပ်စွာ အပြစ်ပြုနိုင်သောဘာသာတရား၊ စည်းကမ်းမရှိသောဘာသာတရား နှင့် လုပ်ရန်နှင့် မလုပ်ရန်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော ဘာသာတရားသည်အဘယ်နည်း? ကျွန်တော်ဖော်ပြထားခဲ့သည်အတိုင်း ဘာသာတရားသည်ဤအရာများထက် သာလွန်ရန်လိုအပ်သည်။ သာ၍ချိုမြိန်သော ဘာသာတရားမျိုး ကိုရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သလား?
ကျွန်ူပ်တို့ယုံကြည်နိူင်ရန် ပြိုင်ဆိုင်သောဘာသာတရား များစွာရှိသည်။ မူဟာမစ်(သို့) ကွန်ဖြူး ရှပ်(သို့)ဗုဒ္ဓ(သို့)ချဲလ်တိုက်(ဇ်)ရာဇဲလ်(သို့)ယောရှပ်စမစ် တို့ထက်သခင်ယေရှုသည် သာလွန်သည်ဟု မည်သူပြောနိုင်မည်နည်း။ လမ်းအားလုံးက ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့မပို့ဆောင်နိူင်မည်လော။ ဘာသာတ ရားအားလုံးတို့၏ အခြေခံသဘောတရားသည် တူညီသလော? လမ်းအားလုံးက အမေရိကနိူင်ငံအင်ဒီး ယားနားသို့ မပို့ဆောင်သည့်နည်းတူ ဘာသာတရားအားလုံးသည်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ မပို့ဆောင်နိူင်ပေ။
သခင်ယေရှုကသာလျှင် ဘုရားသခင်ကိုယ်စား အခွင့်အာဏာရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော်သူတစ်ဦးတည်းသာလျှင် သေခြင်းတရားကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ မူဟာမစ်၊ ကွန်ဖြူးရှပ်နှင့် တခြား သောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည် သချင်္ုိင်းတွင်း၌သာ နိဂုံးချုပ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်သခင်ယေရှု သည်ရောမစစ်သားတို့၏ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်သော ကားတိုင်တော်ပေါ်၌ အသေခံပြီးနောက် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သူ၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ူပ်တို့ဂရုစိုက် ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည် သေခြင်းကိုအောင်သောသူဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်၊ သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောသူ တို့၏စကားကို နာခံသင့်ပါသည်။
သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေကို နေရာအများအပြားတွင်တွေ့ရသည်။ ပထ မအနေဖြင့်၊ လူပေါင်းအယောက်ငါးရာကျော်တို့က ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းကို သက်သေထူခဲ့သည် ၄င်းသည် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းကို အများဆုံးသက်သေထူသောနေရာဖြစ်သည်။ လူအယောက် ငါးရာ၏နှုတ်ထွက်စကားကို မထီမဲ့မြင်မပြုနိူင်ပေ။ သချင်္ုိင်းဂူလည်း ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သခင်ယေရှု၏ရန်သူတို့က သခင်ယေရှုသည် အသက်မရှင်ပါဟု လုံးဝမပြောနိုင်တော့ပေ။ သချင်္ုိင်း တွင်း၌သေနေသည့်ခန္ဓာကိုယ် မတွေ့ရတော့ပေ။ သင်္ချိုင်းဂူသည် ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်သွားခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ၏တပည့်တော်တို့က ခိုးယူနိူင်မည်လော? မခိုးနိုင်ပေ။ ထိုသို့မတွေး နိူင်ရန် သခင်ယေရှု၏သင်္ချိုင်းဂူသည် စစ်သားတို့ကကျောက်တုံးကြီးဖြင့် လုံခြုံစွာပိတ်ဆို့ထားသည်။ သခင်ယေရှု၏အနီးကပ်ဆုံးဟု ထင်မှတ်ခဲ့သောတပည့်တော်တို့သည် ခရစ်တော်အသေခံချိန်တွင် အဖမ်းခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့သည်။ တံငါသည်များ၊ ကျွမ်းကျင် သောစစ်သားများဖြစ်နိူင်ရန် သင်တန်းပေးခြင်းသည် အကျိုးမရှိသည့်ပုံပေါ်သည်။ အဓိကအချက်သည် သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ထမြောက်ခြင်းမရှိဟူ၍ လုံးဝမပြောနိူင်ပေ။
တဖန် သေခြင်းမာန်ကိုအောင်မြင်သောသူ၏ စကားကိုကျွန်ူပ်တို့နားထောင်သင့်ပါသည်။သခင် ယေရှုကသေခြင်းကို အောင်မြင်ကြောင်းသက်သေထူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူပြောသောစကားကို နားထောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်က ကယ်တင်ခြင်းလမ်းခရီးဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်ခဲ့ ပါသည်(ယောဟန်၊ ၁၄း၆)။သခင်ယေရှုသည် လမ်းအများကြီးထဲမှလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ သူသာလျှင် လမ်းခရီးဖြစ်သည်။
ထို့နောက်သခင်ယေရှုက “ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသိုလာကြလော့။ ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။” (ယော၊ ၁၁း၂၈)ဟု မိန့်ဆိုထားပါသည်။ ပျက်ဆီးနေသောဤလောကတွင် အသက်ရှင်ခြင်းသည် ခဲယဥး်လှသည်။ လူအများစုတို့သည် သွေးယိုခြင်း၊ ရန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် စစ်ပွဲကျင်းပ ခြင်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ မိတ်ဆွေသဘောတူပါသလား? မည်သည့်ဘာသာတရားကို မိတ်ဆွေ သဘောတူသနည်း။ အပြစ်တစ်ဖန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းလား? သို့ ရိုးရိုးသာမန်ဖြစ်သောဘာသာတရား လား? အသက်ရှင်သောကယ်တင်ရှင်လား? သေနေကြသောပရော်ဖက်များလား? အကျိုးရှိသော ဆက်နွယ်မှုလား? (သို့) အကျိုးမပြုသောဘာသာရေးအခမ်းအနားလား? သခင်ယေရှုသည် ဘာသာ ရေးအများအပြားမှ တစ်ခုအပါအဝင်မဟုတ်ပဲ သူသာလျှင်ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေသည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရယူလိုပါက သခင်ယေရှုသာလျှင် စစ်မှန်သော“ဘာသာ တရား“ ဖြစ်သည် (၁ဝး၄၃) ။ ဘုရားသခင်နှင့် အကျိုးရှိရှိမိတ်သာဟာရဖွဲ့လိုလျှင် သခင်ယေရှုသာ လျှင်စစ်မှန်သော “ဘာသာတရား“ ဖြစ်သည်။ (ယော၊ ၁ဝး၁၀) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် အိမ်ပိုင် ဆိုင်လိုပါက သခင်ယေရှုသာလျှင်စစ်မှန်သော “ဘာသာတရား“ဖြစ်သည်။(ယောဟန်၊ ၃း၁၆) ။ မိတ် ဆွေသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ပါ။ နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
မိတ်ဆွေ၏ အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်းအခွင့် ရရှိရန်အတွက်သူ့ကိုယုံကြည်ပါ။ စိတ်ပျက်ရလိမ့် မည်မဟုတ်ပေ။
ဘုရားသခင်နှင့် “စစ်မှန်သော ဆက်နွယ်ခြင်း“ကို မိတ်ဆွေလိုအပ်ပါက ဤသို့ဆုတောင်းပါ။ ယုံကြည်ခြင်းမပါပဲ ဆုတောင်းခြင်း(သို့)တခြားဆုတောင်းခြင်းတို့က မိတ်ဆွေကိုကယ် တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမပေးနိုင်သည်ကို မှတ်ထားပါ။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကသာ မိတ်ဆွေကို အပြစ်နွံထဲမှ ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ဤဆုတောင်းခြင်းသည် မိတ်ဆွေကဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုး စားကြောင်းနှင့် သူပြင်ဆင်ထားသော ကယ်တင်ခြင်းတရားအတွက် ကိုယ်တော့်ကိုကျေးဇူးတင် စကား ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ူပ်သည်ကိုယ်တော့်ကို ပြစ်မှားကြောင်းနှင့် ထိုအပြစ်တရား အတွက်တရားစီရင်ခြင်းပြစ်ဒဏ်ကို ကျွန်ူပ်သည်ခံထိုက်ကြောင်း ကျွန်ူပ်သိပါ၏။ ကျွန်ူပ်ခံထိုက်သော အပြစ်ကြွေးအားလုံးကို သခင်ယေရှုခရစ်တော်က ယူဆောင်သွားခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ူပ်သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရပါ၏။ ကျွန်ူပ်သည်အပြစ်ဒုက္စရိုက်နွံမှှ ရုန်းထွက်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ကိုယ်တော့်ကိုကျွနူ်ပ်ယုံကြည်ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ်တော်၏ အံ့သြဖွယ်သော ကျေးဇူးတော်များနှင့် ခွှင့်လွှတ်ခြင်းတရား၊ ထာဝရဆုကျေးဇူးတော်အတွက် ကိုယ်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏”!အာမင်!
ဤနရောတှငျမိတျဆှဖေတျခဲ့သောအကွောငျးအရာကွေ ာငျ့ခရစျတောျကိုလကျခံရနျဆုံးဖွတျခကြျခခြဲသလား? ဆုံးဖွတျခကြျခခြဲ့လြှငျ“ယနေ့ခရစျတောျကို ကြှနုျပျလကျခံခဲ့ပါပွီ”ဟူသော စကားစုကို နှိပျပါ